HomSuvedi — Wed, 07/01/2015 - 12:49
घटना घटेको अवधिपछिका निकै वर्ख बिते । उहाँकरुको भाटे कारबाहीबाट कारबाहीको प्रक्रिया अलिक बेग्लै हुन थालेको थियो । देशै भरिका गाविसका कार्यालय भवनहरु ता धेरै नै ध्वस्त गरिसक्नु भएको थियो । सेना र पुलिस चौकीहरुमा पनि उहाँहरुले हमला गर्न थालिसक्नु भएको थियो । त्यसबाट देशमा जनताहरुका छोराछोरीहरु पनि निकै नै सोतर पारिसक्नु भएको थियो । मेरो माओली दाजुकी छोरी आठ कक्षामा पढ्दा पढ्दै सामन्तवादी दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादी नोकरसाहीहरुको विरुद्धमा उहाँहरुको डफ्फामा लागेर देशलाई जनगणतन्त्र बनाउन लागिसकेकी र सेनाको हातबाट मारिइ पनि सकेकी थिई । यो ता एक उदाहरण मात्र थिई । यस्तै धेरै बालबालिकाहरु शोषक, साम
HomSuvedi — Sun, 06/07/2015 - 11:34
यस अघि पनि मैले कतै राघी गाईको कथा भनेको छु ।
फेरि आज पनि । २०, २२ सालतिरको कुरा हो । हाम्रो राघी गाई चोर्नमा रिपु थियो । गोठालाले ऐचन नसक्ने खालको थियो । दाम्लो पनि कसरी हो खुस्काउँथ्यो । गाईलाई फाले लाउनु हुन्न भनेकोले फाले लगाइन्नथ्यो । भोकाएपछि थलैबाट अघि बारीमा पसेर डम्म पेट पारेर फेरि थलैमा गएर मचमच गरेर गाज काढ्दै उघ्राइरहेको हुन्थ्यो अाँखा छलेर। हामी तिनछक्क पथ्र्याैं । जंगलमा चराउन लगे पनि घर फर्कने बेलामा त्यसले बाटामा पर्ने छरछिमेकीहरुको बालीनालीमा पसेर नलुँड्याएको दिनै हुन्नथ्यो । आँखा छलेर अघि कताकताबाट त्यसले गोठालाको दोहोलो काढ्थ्यो ।
kisan.magar.7 — Fri, 06/05/2015 - 23:36
कृष्ण मगर (हत्तिखर्क)
मेरो अगालोमा कसिएर धरधरी रोएको मेरो आँखा बाट हटेको छैन छोरा ! म अबको हरेक पल हरु तिम्रै खातिर हुनेछु अनि तिम्रो प्रगतिमा रमाउने छु ।
बस, तिम्रो खुसिको लागि म कुनै पनि जोखिम लाई सामन गर्न तयर छु छोरा मलाई माफ गर सक्छौ भने ।
गोपीलाल कँडेल — Tue, 02/24/2015 - 03:04
म गत २०६९ बैशाख ३ गते बिहान कोहलपुर मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा थिए । त्यहाँ म त्यसै गएको होइन मलाई गत चैत्र २९ गते बर्दियाको गुलरियामा लायन्स क्लव अफ बर्दिया र सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र काठमाण्डौद्धारा संचालित हृदयरोग तथा मधुमेह सम्बन्धी एक दिने शिबिरबाट फिजियोथेरापी गर्न एवं रगतमा बिबिध जाँच गर्न भनी रिफर गरिएको थियो ।
बैशाख ३ गते बिहान ७.३० बजे त्यहाँ पुग्दा बहिरंग बिभागमा बिरामीहरूको ठूलो भीड थिएन किनभने बिहान चाँडै पुगेको थिएँ । मभन्दा अगाडि ५ जना लाइनमा थिए । त्यो दिन थरुहटको नयाँ मुलुक बन्दको कारणले पनि बाहिरबाट आउने बिरामीको संख्या कम थियो कि भन्ने अनुमान मैले गरेँ ।
कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलको दुई शतबार्षिकीको स्मरण
editor — Wed, 02/18/2015 - 06:48
कविशिरोमणि लेखनाथको दुई शतबार्षिकीको बारेमा साहित्यकार मुक्तिराम ढकालले कविशिरोमणि लेखनाथको व्यक्तित्व, कृतित्व माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । साहित्य आफ्नै गतिमा बढ्छ, साहित्यले मानवलाई सिर्जनशील बनाउँछ, समाजको परिवर्तनलाई समाउँछ र आधुनिकता दिन्छ भन्दै लेखनाजीको बहुआयमिक व्यक्तित्वको बारेमा प्रष्टाउनु भएको थियो ।
बाको कोरा बस्दा
editor — Sat, 11/08/2014 - 18:37
शिव शर्मा चञ्चल
ठ्याक्कै पाँच महिनादेखि बाको बोली नै फुटेन । बासँग हाम्रो दोहोरो कुराकानी हुन सकेन । मुटुको धडकन चल्नु बाहेक शरीरको कुनै पनि अंग सक्रिय भएन । बाको यो हालतले एक वर्ष देखि नियमित महिनामा तीन– चार पटक पोखराबाट गाउँ पुग्नु पर्थ्यो मलाई । तन पोखरामा भए पनि बाको हालतले गर्दा मन सधै गाउँमै डुल्थ्यो ।
एक्ली आमालाई बाको स्यारसुसार गर्नु कम्ती मुस्किल थिएन । बिरामी बाको हेरचाह आमाले पाँच वर्षदेखि गर्नुभयो । होसले हो या केल्ले बाले संसार छाडनु दस दिन अघि दाइ र मेरो नाम लिएर एक/एक पटक बोलाउनु भएको रहेछ । अनि आमाले डाकेर त्यसपछि म दाजुसँग घर पुगे ।
anuzkulung4 — Sun, 10/19/2014 - 21:00
हटलाइन दैनिक पोखरा
फेसबुकमा जानेर नजानेर जसरी भए पनि मलाई केही त्यस्ता साथीहरूसँग जोडिदिए । जोसँग मेरो मनोभावनाहरू एकिकृत भइदिन्छ । अनि म पुग्छु । ती व्यक्तिहरूको निकट । र म खुशी हुन्छु । उनीहरूसँग निकटतामा बाधिन पाउदा । त्यस्तै निकटतामा फेसबुकले मलाई जोडिदिएको एक साथी हुन् यूवा बर्गहरूको एक प्रेरणाको श्रोत समाजसेवी सरीता गुरुङ । संभवत फेसबुक नभएको भए मेरो सरीतासँग परिचय नहुन्थ्यो होला । भनौ उनीसँग एक त्यस्तो सामिप्यता नबढ्थ्यो होला ।
वृहस्पति (The Jupiter)
केशव बोहोरा — Wed, 09/10/2014 - 15:10
That’s Jupiter. The bigger one is Jupiter and others are its moons. ऊ धाराप्रवाह रुपमा व्याख्या गर्दै थियो । उसका कुनै कुरा मैले बुझेँ, कुनै बुझिन । कारण थियो उसको खगोलशास्त्रीय शब्दहरूको प्रयोग । बिचबिचमा yes भन्दै र टाउको हल्लाउँदै १/२ मिनेट जुपिटर अर्थात वृहष्पति ग्रह र त्यसका देखिएका चारवटा चन्द्रमा नियालिरहेँ । ऊ भन्दै थियो, “Jupiter has 11 moons …………… blah blah…….”। म अब टेलिष्कोपबाट आफ्ना आँखा मोडेर आकाशमा दृष्टि लगाउँदै थिएँ । ऊ प्रत्येक चम्किला पिण्डहरूलाई ग्रह, उपग्रह र ताराहरूमा विभाजन गर्दै मलाई बताइरहेथ्यो । म बुझे झैँ टाउको हल्लाउँदै उसका औँलाका इसारामा आँखाहरू दौडाउँदै थिएँ ।
बहुभाषिक राष्ट्रिय कविता गोष्ठी
editor — Fri, 09/05/2014 - 04:08
म भर्चुअल लाइफमा बढी रम्ने मान्छे । बाध्यता, विवशता अथवा समयको माग भनौंबन्द कोठामा बसेर विश्व परिक्रमा गर्न मन पराउने म एउटा जीव । तर यही समयकहिलेकाहीँ मलाई उडाउँछदुरदराजमा, अनन्त यात्रामा र पुर्याउँछफ्ल्यास ब्याकमा ।
लगभग एक वर्ष अगाडि एउटा सन्देश प्राप्त गरेकी थिएँ फेसबुकमा। सन्देश प्रवाहकहुनुहुन्थ्यो हेटौंडाको प्रतिभाशाली गजलकारभाइ धर्मराज स्याङ्तान र सन्देश् थियो-दिदी नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सहकार्यमाहेटौडा शक्ति एफएमले आयोजना गरेको बहुभाषिक राष्ट्रिय कविता गोष्ठी आयोजनागर्दैछ। नेपालभरिबाट अन्य प्राय सबै भाषामाकविताहरू प्राप्त भैसक्यो तर तामाङभाषाको भने एउटा पनि आएन। हाम्रोसमुदायको तर्फबाट तपाँईले एउटा कविता पठाएर प्रतिनीधित्व गरिदिनुपर्‍यो ।
editor — Sun, 08/31/2014 - 23:28
सौतिनी आमा, सौतिनी बाबु, सौतिनी पेच, सौतिनी डाहा, सौतिनी माम्लो सर्वत्र सुनिएको हो। चिरपरिचित शब्द सुनेकै अनि बुझेकै पनि हो। तर, सौतिनी बाटो- सुन्दा पनि अचम्म? नयाँ शब्दैजस्तो, नयाँ कौतूहल नै सलबलाएजस्तो।
editor — Sat, 08/23/2014 - 19:18
कोसौं टाढा हिँडेर आइपुगेका थियौं हामी। हामी भन्‍नाले मेरो कलेजका अग्रज उदितनारायण झा र म। हामी दुवै भोकै, दुवै लखतरान।
Mohansinghkc — Sat, 08/09/2014 - 15:44
अफ्रिका महादेशमा थुप्रै देशहरू छन् । केही देशहरू मोजाम्बिक, रुवाण्डा, कंगो, सोमालिया, शेरालियोन, लाइबेरिया, सुडान जस्ता देशहरूमा आन्तरिक वा जातीय दङ्गाका कारण राजनीतिकअसन्तुलनका कारण संयुक्तराष्ट्र्संगमार्फत मिशन संचालन गरी रुवाण्डा, शेरालियोन, मोजाम्बिक जस्ता देशमा पुन शान्ति कायम भइसकेको छ भने लाईबेरिया, सुडान, चाड जस्ता देशहरूमा अँझै मिशन कायमछन् । सुडानको डारफरमा पनि UNAMID (युनाईटेड नेशन हाइब्रिड मिशन एण्ड अफ्रिकन मिशन इन डारफर) संचालन भएको छ ई सं २००७ देखी यसै शिलशिलामा विश्वका विभिन्न देशका प्रहरी, आर्मी तथा सिभिलयनहरू सहभागी हुन आएका हुनछन् ।
नेपाली आधुनिक सङ्गीतका शिखर साधक भक्तराज
editor — Tue, 07/29/2014 - 03:34
२०३९ सालको असार महिनाको एक बिहान, ललितपुरको चक्रपथ क्रस गरेपछि करिब एक मिनेटको दूरीमा बाटोको बायाँतर्फ रहेको एउटा घरमा म पुग्छु ।
editor — Fri, 05/02/2014 - 20:32
भरखरै वरिष्ठ साहित्यकार अनिल पौडेलको अतितको "विस्कुन" नामको आत्मसंस्मरण बजारमा आएको छ । जसलाई पाठकहरूले खुब रुचिकासाथ पढिरहेका छन् । त्यहाँ "बिहेको कथा" शिर्षकको संस्मरण छ । उनको विवाहको सन्दर्भको जसमा उनले नढाँटी नलजाई आफ्नो आर्थिक दुदर्शा उल्लेख गरेका हुन् । जसलाई नजिकबाट त्यो कुरा नबुझ्नेले अतिशयोक्ति पनि मान्न सक्छन् । तर उनको विवाहमा जन्ती गएका मेरा आफन्तहरूको कुरा अनुसार सबै सत्य हुन् मेरो विचारमा ।
कविता खोज्नु पर्दैन
ह्याप्पी ‘भालेटायम’ डे !